Apple ချစ်သူလေးပါ.. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » Apple ချစ်သူလေးပါ..
Posted by Shar Thet Man on Mar 28, 2017 in Arts & Humanities, Business & Economics, Creative Writing, Cultures, Ideas & Plans, Literature/Books, Think Different |4comments
မွန်လေးတစ်ယောက် ဘယ်လောက်တောင် Apple product ကိုရှုးသွပ်လည်းဆိုတာကိုပြောပြပေးချင်ယုံသက်သာပါ..ကြွားတာ မဟုတ်ပါ။
Apple ဖုန်းစပေါ်တာကတော့ 3G ဆိုတဲ့ဖုန်းနဲ့ပါ..အဲတုန်းကတော့ ဒီဖုန်းအကြောင်းကောင်းကောင်းမသိခဲ့ပါဘူး။ နောက်ပိုင်းရုပ် ရှင်ကားတွေထဲမှာမင်းသား၊ မင်းသမီးတွေကိုင်ကြတာတို့၊ ဦးလေးတို့ကိုင်တာတွေမြင်ပြီး သိပ်ကိုင်ချင်ခဲ့တာပေါ့။ အဲဒါနဲ့ ဦးလေးကရော့သူ့ဖုန်3းGS ကိုင်ဆိုပြီးစပေးကတည်းက စပြီးရူးတော့တာပါပဲ.
3Gsလေးကိုစကိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ နောက်ပိုင်း ဖုန်းအသစ်တွေထပ်ထပ်ထွက်လာတော့ 4s ပြောင်းကိုင်ခဲ့ပါတယ်။
#3gs နဲ့ 4s ဘာကွာလဲဆိုရင်
ဒီဇိုင်းကွာသွားပါတယ်..3gs ကနောက်ကော အခုံးလေး..4s က အခုံးတစ်ခုမှမရှိတော့ဘဲလုံးဝလေးထောင့်ဆန်သွားတယ်။
ကင်မရာ pixel တွေကွာသွားတယ်။ iOS Supportတွေ၊ ဘူးတွေကွာသွားတယ်။ 4s ကပိုကောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်။
မမျှော်လင့်ဘဲ..စာဖတ်ရင်းဖုန်းအောက်လွတ်ကျလို့ 4S ဖုန်းလေးမှန်ကွဲသွားပြီး မကျွမ်းကျင်တဲ့ဆိုင်မှာသွားပြမိတာ..အထဲက စက်ပါထိသွားတယ်ဆိုလားပြောတော့..ရင်ကွဲရတော့တာပါပဲ။
အဲလိုနေရင်းနဲ့..ကံကောင်းချင်တော့အစ်ကိုတစ်ယောက်ကနိုင်ငံခြားကနေသူပြန်လာဖို့ရှိတယ်၊ ဘာမှာချင်လဲလို့ပြောလာတော့ကိုယ်တွေပျော်ပြီပေါ့။ ခုလောလောလတ်လတ်လိုနေတာ ဖုန်းကောင်းကောင်းလေးတစ်လုံးလေ။ အဲဒါနဲ့ iphone လေးတစ်လုံးလောက်တော့လိုချင်တယ်လို့ပူဆာလိုက်ပါတယ်။ အဲ့တုန်းက iphone5နဲ့ 5s အချိန်လေ။ သူက5တစ်လုံးဝယ်လာခဲ့ပေးပါတယ်။ အရမ်းကိုပျော်သွားခဲ့ပါတယ်။
#5 နဲ့ 4s ဘာကွာလဲဆိုရင်
ဒီဇိုင်းကွာသွားပါတယ်..5 ကရှည်ရှည်လေးဖြစ်သွားပြီးပေါ့လည်းပေါ့သွားပါတယ်။ update version တွေကောင်းကောင်းမြင့်လို့ရ သွားတယ်။ ကင်မရာ resolution နဲ့ widescreen မြင်ကွင်းတွေလည်းကွာသွားပါတယ်။ အီဖေကို..selfie တွေအသေဆွဲ၊ ခရီးထွက်တော့လည်း ၀ယ်ထားတဲ့canon ကင်မရာ ဆိုတာ..ဘယ်ရောက်နေမှန်းမသိ။
၄နှစ်လောက်ကိုင်လည်းပြီးရော..iphone က7series ထွက်လာပါရော..ထွက်ခဲ့တဲ့ဖုန်းအဟောင်းတွေနဲ့လုံးဝအပြတ်အသတ်ကွာ သွားတယ်တဲ့။ အဲဒါနဲ့ iphone7rose gold တစ်လုံးလေးဝယ်ကိုင်လိုက်ပါတယ်။ အနီမရှိလို့ rose gold လေးဝယ်လိုက်ရတယ် ဆိုပါတော့..သိပ်မကြာဘူး..apple ကရက်စက်တာများပြောပါတယ်။
Red edition ဆိုပြီး အနီရောင်စက်စက်လေးထွက်လာပါ တယ်။ လှလိုက်တာလေ..မွန်လေးကအနီရောင်ကိုအကြိုက်ဆုံးပါ..ဖုန်းအသစ်ကလည်းဝယ်ထားတာမကြာသေးတော့.အနီကိုလဲ
ဖို့ကလည်းအလိုက်ပေးပြီးမှဝယ်မှရမှာပေ့ါဆိုတော့..လိုသေးတာပေ့ါလေ..။ စတိဗ်ဂျော့ရ်ှက တကယ်တော်တဲ့သူပါ။ သူကခုထိလူ သာသေပေမဲ့ နာမည်မသေတဲ့လူအဖြစ်ကျန်နေခဲ့တဲ့သူတွေထဲကတစ်ယောက်ပါ။ Apple ကထုတ်တဲ့product ဆိုမ၀ယ်ချင်တဲ့သူ မရှိရအောင် သူ့ရဲ့Marketing ကိုထိန်းထားနိုင်တာ ဂုဏ်ယူစရာပါ။ အထူးသဖြင့်မွန်လေးကိုကြည့်လေ.iphone မှ iphone ပဲ. တခြားဘယ်ဖုန်းမှကိုမကိုင်တာပါ။(၀ယ်ရတာနဲ့ကိုတန်တာ၊ ဥပမာ Android တစ်လုံးကိုင်ပြီးနောက်တစ်လုံး ပြောင်းကိုင်ချင်ရင်Data တွေကအစပြန်ရွှေ့ရတယ်။ iphone ကရွှေ့စရာမလိုပါဘူး၊ icloud ဖွင့်လိုက်ရင်နောက်ဟမ်းဖုန်းအသစ်ထဲအော်တိုရောက် သွားတာမျိုးပါ။(ကြွားတာမဟုတ်ပါ) )သူ့ကိုလုပ်ကြွေးတဲ့သူထဲမှာ..မွန်လေးလည်းပါတယ်လို့။ ခရီးသွားရင် ipadကလည်းအမြဲဆောင်ထားရပါတယ်။ အင်တာနက်လေးဘာလေးသုံးဖို့ပေ့ါနော်။သူကလည်းကွန်ပျူတာအသေးစားလေးလိုပဲအသုံး ၀င်တော့လေ။ iphone သုံးတဲ့သူတိုင်းကတော့ သူဘယ်လောက်အသုံးဝင်တယ်ဆိုတာတော့သိကြမှာပါ။ ခုတော့ iphone crazy
အပြား သေးသေးတယ် မကြိုက်ဘူး
ကိုင်မယ်လို့ ပဲပြောတာ ၀ယ်မယ်လို့ မပြောဘူး